noma Bonheur Pastel loft edolobheni - I-Airbnb
noma Bonheur Pastel loft edolobheni
Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, i-France
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Tommy
I-Au Bonheur Pastel itholakala enhliziyweni yenkaba yedolobha lase-BOURG en Bresse, le ndlu encane enhle elungiswe ukuze ibe ukunambitheka kosuku ayikho ngaphansi kwanoma yikuphi ukungcoliswa komsindo. Nge indawo 51m2, it has a endaweni ingalali nge ikhabethe, alo embhedeni ngesicelo, i ikhishi ifakwe bar, endaweni yokudlela abantu 4 kuya kwezingu-8, yokugezela ukhululekile elineshawa (AmaSpredishithi kanye amathawula enikeziwe), i-TV, WiFi , umbhede usofa, iWC ehlukile.
Nganoma yisiphi isicelo xhumana nathi, kungukucophelela nangentokozo ukuthi sizohlangabezana nokulindelekile kwakho.
I-Au Bonheur Pastel itholakala maphakathi ne-BOURG en Bresse, uzothola zonke izitolo ozifunayo eduze nendawo ephezulu. Isiteshi sesitimela i-SNCF siyimizuzu eyi-10 ngezinyawo, i-cinema imizuzu emi-5 kanye nehhovisi lezivakashi imizuzu emi-2.
I-BOURG en Bresse iyidolobha elinezakhamuzi ezingu-40,000 elidume ngenkukhu yalo ye-BRESSE, uzothola iminyuziyamu namapulazi ongawavakashela kanye nesonto elidumile laseBrou (10 min walk), itshe lesikhumbuzo eliyintandokazi laseFrance.
izimbazo ezinkulu: ihora eli-1 ukusuka e-LYON, imizuzu engama-30 ukusuka e-MACON, ihora elingu-1 30 ukusuka e-GENEVA.
ubusuku obungu-7 e- Bourg-en-Bresse
4.77 · 131 okushiwo abanye
Hlola ezinye izinketho ezise- Bourg-en-Bresse namaphethelo